Samsung Gear S2, smartwatch kacha mma na ahịa? | Gam akporosis
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | IFA, Nyocha, Samsung, smartwatch
Ihe mbụ smartwatches kụrụ n'ahịa abụghị ihe a ma ama maka atụmatụ ha. Na Motorola na ya Moto 360 gbanwere ihe. Elekere nwere ihuenyo okirikiri nke kara akara tupu na mgbe ọ gachara n'ahịa. Ndien ke akpatre Samsung ahọrọla ụdị ụdị a.
Mgbe anyị nwere ohere ịnwale Samsung Gear S2 Na mbipụta ikpeazụ nke IFA na Berlin, ihe mmetụta ahụ enweghị ike imeri. The mbụ okirikiri smartwatch nke Korea ụlọ ọrụ na-abịa stomping na, m na uche, ọ bụ ihe kasị mma nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ a mma nche, na ezi risịrị na n'elu ihe nile na n'ezie mma software.
Samsung Gear S2 na Tizen
Gear S2 na-apụta maka ya mara mma ma dị mma n'anya. Ngwaọrụ dị mma imetụ aka na nke mbụ ị lere anya dị ka elekere egwu. Ihe m na-ekele. Ke adianade do, Samsung bụghị naanị na-elekọta imewe.
Ihe nlele nke a bu nke ya Super AMOLED ngosi nke ahụ na-enye ezigbo nkọ, karịa ma ọ bụrụ na anyị echee na ihuenyo ya okirikiri bụ 1.2 sentimita asatọ na mkpebi nke 360 ​​x 360 pikselụ. Tụkwasị na nke ahụ, Samsung ejirila ohere nke na-enye anyị ohere ịgafe site na nhọrọ dị iche iche na-enweghị imetụ iko ihuenyo ahụ aka. N'ụzọ dị otú a, ọ gaghị ejupụta na akara dị ka ọ na-eme na nche nke asọmpi ahụ.
Nyochawa ya anaghị adị iche ma e jiri ya tụnyere ndị asọmpi ya: dual-core processor, 512 MB nke RAM, 4 GB nke nchekwa dị n'ime, mmiri na-eguzogide ọgwụ ... Ihe na-adọrọ mmasị na-abịa na sistemụ arụmọrụ gị. Ma na Samsung kpebiri ịkụ nzọ na nke ya, na-agba ọsọ site na gam akporo Wear. Na nke a emeputa ji ya software Tizen, nke site na ihe anyị nwee ike ịchọpụta, bụ os zuru oke.
Anyị nwere ike iji ekwentị anyị na-emekọrịta ihe site na ị rụọ ọrụ dị iche iche site na iwu olu ma ọ bụ rụọ ọrụ dịka S Health, Find Find My Device, Nike + Na-agba ọsọ n'etiti nhọrọ ndị ọzọ.
Ọzọkwa ọ bụrụ na ị na-achọghị na-ebu gị na ekwentị gị na e nwere a 3G ụdị Ọ gụnyere oghere kaadi SIM ma nye gị ohere iji Samsung Gear S2 dị ka elekere na-enweghị nchebe, na-enweghị mkpa ijikọ ekwentị.
Samsung Gear S2 na-atụ anya ka kụrụ ahịa na ọnwa Ọktọba na ọnụahịa nke euro 349 maka ụdị nke a na 449 euro maka ụdị nke 3G.. Anyị ga-echere iji nwalee nnwere onwe nke elekere a, otu akụkụ nke ụdị ngwaọrụ a kachasị emetụ aka, iji hụ ma ọ na-egbo mkpa nke ụbọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung Gear S2, smartwatch kacha mma na ahịa?
Zaghachi Sergio Xd
Fran papa m dijo
Oghere SIM. Biko, gwa onwe gị tupu ị dee edemede ahụ. Ọ bụ nsụgharị na E-Sim ma yabụ na ọ gaghị adị na Spain ruo mgbe EU kwere ka usoro a. Na agbanyeghị…
Zaghachi Fran papasito
Wiko egwurugwu JAM, 5 sentimita asatọ na mkpebi HD maka ihe na-erughị € 140